I-South Africa Africa Uhla lwezinombolo zocingo | Iselula Eholelayo | Database lakamuva Lokuposa
ISouth Africa Africa Uhla lwezinombolo
Database lakamuva Lokuposa » ISouth Africa Africa Uhla lwezinombolo
I-South-Africa Ucingo Izinombolo
Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseNingizimu Afrika lunikeza uhlu lwabathengi bakho okuqondiswe kubo imininingwane egcwele. Idathabheyili Yokugcina Yamaphepha nayo, ihlinzeka ngohlu lwezinombolo zocingo olusha nolusemthethweni.Uma ufuna ukukhuthaza ibhizinisi lakho kumthengi waseNingizimu Afrika ngqo.
Uhla lwethu lwezinombolo zocingo lweNingizimu-Afrika luyinsiza ephelele ezokusiza ukumaketha imikhiqizo yakho nezinsizakalo zakho ngempumelelo. Leli thuluzi lokumaketha liyiqoqo lamakhasimende afanele e-South-Africa naseNingizimu Afrika. Ngosizo lwalolu hlu, Uzokwazi ukunakekela izinkulungwane zamakhasimende abazoba lula kalula.
Thenga Uhlu Lwabasebenzisi Lwabasebenzisi BaseNingizimu Afrika Afrika
INingizimu Afrika Uhlu Lwezingcingo Zamakhasimende
Uhla lwabathengi baseNingizimu Afrika mhlawumbe luyindlela engcono kakhulu yokufinyelela abantu, bakhombe amakhasimende esizayo noma ngabe bakuphi. Lokhu kuvame ukuba ngcono kunokuba kuthunyelwe i-imeyili ohlwini lwakho lwababhalisile oxhumana nabo okukhethwa kukho umthengi okukhethwa kukho umakhalekhukhwini ophethe namakheli we-imeyili naweposi wemikhankaso eneziteshi eziningi ezifana nokuthengisa izingcingo, ukumaketha amaselula, ukumaketha ama-sms, ukumaketha nge-imeyili kanye nemikhankaso yokubiza amakhaza.
I-Database yakamuva Yokuposa noma isayithi yakamuva yedatabase.com iyindawo ethembekile kunazo zonke yokuthumela uhlu lwabathengi baseNingizimu Afrika abalungile ukuze ubhekabheke ngokushesha ukufinyelela abathengi abaningi okubhekiswe kubo ukumaketha futhi uthengise yonke imikhiqizo nezinsizakalo zenkampani yakho.Lokhu kungenza insiza yakho yamakhasimende isebenza ngempumelelo futhi ithembekile ukuncenga ikhasimende lakho ngokuthenga imikhiqizo yakho noma nezinsizakalo zakho.
Uhlu lwezinombolo zabathengi baseNingizimu Afrika noma uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi olusuka ku-Dashibhodi Yokugcina Yamahhala noma i-latestdatabase.com iqukethe okulandelayo:
Amarekhodi angama-80,000 avuselelwe anembile aqoqwe kusuka kumapulatifomu ahlukile athembekile
Ukukunikeza intengo engabizi kakhulu efinyelela ku- $ 800
Ikhadi le-Visa, ikhadi le-Master, PayPal, skrill, Western Union nezindlela eziningi zokukhokha ongazenza
INingizimu-Afrika Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo